सामुदायिक रेडियो राप्ती एफ.एम. सल्यान आज देखी १३ औँ बर्षमा प्रवेश « Salyan Today
सामुदायिक रेडियो राप्ती एफ.एम. सल्यान आज देखी १३ औँ बर्षमा प्रवेश
सल्यान जिल्ला कै पहिलो सामुदायिक रेडियो राप्ती एफ.एम. १०४.८ मेगाहर्ज आज देखी १२ औँ बर्ष पुरा गरेर १३ औँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । रेडियोले आफ्नो नियमित प्रशारण आरम्भ गरेको आज १२ औँ बर्ष पुरा गरेको हो ।
शारदा मिडिया संगमद्धारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो राप्ती एफ.एम. ले आफ्नो प्रशारण शुरु गरेको १२ बर्ष पुरा गरि १३ औँ बर्षमा प्रवेश गरेको अबशरमा आज १२ औँ बार्षिकोत्सव मनाउन लागेको छ । २०६४ साल मंसिर २६ गतेदेखी नियमित प्रशारण शुरु गरेको रेडियोले सत्यतथ्य समाचार, सुचना, बिज्ञापन, गितसंगित प्रशारण गर्दै आएको छ । एक सय वाट क्षमता भएको यस रेडियो अहिले दैनिक १७ घण्टा प्रशारण हुदैँ आएको छ । रेडियोको प्रशारण सल्यान सहित दाङ, रोल्पा, रुकुम, प्यूठान, जाजारकोट, सुर्खेत लगाएतका छिमेकी जिल्लाहरुमा सुन्न सकिन्छ । रेडियोको पहुँचमा करिब १५ लाख श्रोता रहेका छन् ।
नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्लाको नै पहिलो रेडियो राप्ती एफ.एम.ले आवाज बिहिनको आवाजको रुपमा काम गरिरहेको शारदा मिडिया संगमका अध्यक्ष रमेश कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो । बार्षिकोत्सवको अबशरमा आज दिउँसो १ बजे रेडियोको प्रांगणमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, पत्रकार, स्रोता, बिज्ञापन दाता, साझेदारी संघसंस्था सबैलाई आमन्त्रण गरिएको छ । बार्षिकोत्सवका अबशरमा आयोजित कार्यक्रमको रेडियो राप्ती एफ.एम. १०४.८ मेगाहर्जले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने छ । साथै बार्षिकोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ ।